उपचार नपाएरै गयो ज्यान | Nagarik News - Nepal Republic Media
उपचार नपाएर मृत्यु भएका धनुषा बटेश्वर गाउँपालिका–४ का ४५ वर्षीय लोकबहादर परियार । तस्बिर:मिथिलेश/नागरिक
प्रादेशिक अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरीटेडेन्ट डा. जामुन सिंहले भने, ‘अस्पातलमा बेड भए पो बिरामी भर्ना लिनु, बेड खाली नभएपछि कसरी भर्ना लिने ? हाम्रो अस्पतालको आइसोलेसन भरिएको छ। बिरामी फर्काउनुको विकल्प छैन।’ डा.सिंहका अनुसार प्रादेशिक अस्पतालमा अहिले २६ बेडको आइसोलेसन छ। जसमा ३२ जना बिरामी छन। देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकको जीवनरक्षा सरकारको पहिलो दायित्व भएको बताए पनि परियारको उपचार नपाएर मृत्यु भयो। कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्य सुविधाबाट बञ्चित हुनु नपरोस् र महामारीका कारण कसैले जीवन गुमाउनु नपरोस् भन्नेमा सरकार संवेदनशील रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए। तर व्यवहारमा उल्टो भयो।
नेपाली सेनासहितका सुरक्षाकर्मीले परियारको शव व्यवस्थापन गरिदियो। तर उनको मृत्युको कारण खुलाउने प्रयत्न कतैबाट पनि भएन। धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्दुप्रसाद बाँस्तोलाले परियारले उपचार नपाएको जानकारी नआएको बताए। गाउँमै उपचारका क्रममा मृत्यु भएको खबर आएपछि नेपाली सेना परिचालन शव व्यवस्थापनि गरिएको बाँस्तोलाले बताए। उनले भने, ‘बटेश्वर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सोमबार राति नै परियारको मृत्यु भएकाले शव व्यवस्थापन गराइदिन भन्नुभयो। मैले नेपाली सेनाको शव व्यवस्थापन टिमलाई व्यवस्थापन गर्न भने।’ उनका अनुसार श्वासप्रस्वासको समस्या भए पनि मृतकमा कोरोना संक्रमण भए/नभएको केही खुलेको छैन। मृत्युपछि स्वाब परीक्षण गर्ने सरकारी नीति नभएकाले नगरिएको उनले बताए।
प्रकाशित: २२ वैशाख २०७८ ०६:५५ बुधबार